हारेका जति सबैलाई फेरि चुनाव गराई जिताउने त ? : झलनाथ खनाल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हारेका जति सबैलाई फेरि चुनाव गराई जिताउने त ? : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ट नेता झलनाथ खनालले काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर सातका सांसद रामवीर मानन्धरले दिएको राजिनामा बारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।
पत्रकार ऋषि धमलाले सञ्चालन गर्ने नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बसहको कुराकानीमा खनालले यस्तो बताएका हुन् । अर्का नेता बामदेव गौतमलाई चुनाव लडाउनकै लागि मानन्धरको राजीनामा आएपछि नेता खनालको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो।
सचिवालय बैठकमा रामवीर मानन्धरले राजिनामा पत्र पठाएको भन्दै उनले आन्तरिक छलफल भइरहको बताए । राजिनामा स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको प्रक्रिया छ।
उपनिर्वाचनमा बामदेव गौतमले चुनाव लड्ने नलड्ने बारे पनि निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने , मानन्धरले भने जस्तै संसदमा गौतमको आवश्यकता त किन छैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने पार्टीका सबै नेताहरुको आवश्यकता हुन्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठको आवश्यकता छ । जति साथीहरुले चुनाव हार्नुभयो सबैको आवश्यकता छ।